Holland America Line ayaa hakad galisay dhamaan maraakiibta Alaska ee ka shiraacata Seattle
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » Holland America Line ayaa hakad galisay dhamaan maraakiibta Alaska ee ka shiraacata Seattle
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Kanada • saaciday inay • Wararka Raaxada • News • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Lix safar oo guud oo ku saabsan Eurodam iyo Oo Amsterdam ayaa saameyn ku yeeshay, martida waxay dib u ballansan karaan safar u dhigma 2022
Holland America Line ayaa lix markab ku hakisay Eurodam iyo Oo Amsterdam
Martida ku ballansan safarada la joojiyay ee Seattle-Alaska June waxaa si otomaatig ah loogu rari doonaa safar u dhigma sanadka 2022 ee qiimaha 2021
Martidu waxay awoodi doonaan inay codsadaan lacag celin buuxda ee dhammaan lacagaha lagu bixiyo Holland America Line
Holland America Line ayaa ku dhawaaqday inay kordhinayso hakadka ay ku hayso howlaha dalxiis ee ay hadda ku darayso dhamaan shixnadaha badaha Juun 2021 ee Alaska laga bilaabo Seattle, Washington. Tan waxaa ka mid ah lix markab oo dalxiis oo Eurodam ah iyo Oosterdam oo laga waco Victoria, British Columbia, Canada.
Waqtigaan, Alaska markab dalxiis oo kasoo raaca Seattle kana duulaya bisha Luulyo iyo wixii ka dambeeya lama joojin. Ka dib amarkii hore ee Ku-meel-gaarka ahaa ee Wasaaradda Gaadiidka Kanada ee lagu xidhay dekedaha Kanada ee laga raray maraakiibta rakaabka, wada-hadallada ayaa sii socda iyada oo mas'uuliyiinta dawladda Kanada iyo Mareykanka ay isku dayayaan in la ilaaliyo badmaaxyada Seattle Alaska. Holland America Line waxay horey u shaacisay in la joojiyay dhamaan maraakiibta Alaska ee sanadka 2021 aada ama ka imaado Vancouver, British Columbia, Canada.
Waxaan sii wadeynaa inaan si firfircoon ugu mashquulno wadahadal lala yeelano mas'uuliyiinta Kanada iyo Mareykanka si aan u fahamno waxa fursadaha dalxiis ee wali laga yaabo inay ka jiraan Alaska, innagoo og sida ay muhiim u tahay suuqan kaliya astaanteenna, laakiin bulshada iyo shaqsiyaadka ku tiirsan ganacsiga, ”ayuu yiri Gus Antorcha, madaxweynaha Khadka Holland America. "Waxaan la wadaageynaa martidayada niyad jabinta joojinta safaradaan, waxaana wali ku rajo weynahay inaan ka shaqeyn karno qaar kamid ah maraakiibta safarka Alaska."
Martida hadda ku ballansan safarka la joojiyay ee Seattle-Alaska June ayaa si toos ah loogu rari doonaa safar u dhigma sanadka 2022 ee khidmadda 2021 - iyada oo dhammaan lacagta caddaanka ah iyo lacagaha mustaqbalka ee Cruise Credit loo wareejinayo ballansashada cusub.
Marka la helo xaqiijin ballansi cusub, haddii martidu ay go'aansadaan inaysan aqbalin ballansashada dalxiis ee 2022, waxay helayaan ikhtiyaar ay ku diidaan ballansashada oo ay helaan FCC 110% wixii lacag ah ee la bixiyo. Martidu sidoo kale waxay awoodi doonaan inay codsadaan lacag celin buuxda oo dhan lacagaha lagu bixiyo Holland America Line.